Ity no zavatra fantatsika momba ny Huawei Mate 10 | Androidsis
Jose Alfocea | | Huawei, About us
Amin'ity taona ity, ny orinasa sinoa Huawei dia vonona ny hiatrika ny Galaxy Note 8 na ny LG V30 manaraka, Google Pixel XL 2 ary koa ny iPhone 8 miaraka amin'ilay vaovao Huawei Mate 10, phablet misy efijery lehibe sy endri-javatra goavambe.
Hodinihintsika manaraka izany izay rehetra "fantatsika" hatreto momba ny mety ho famaritana, endrika ary famolavolana ny Huawei Mate 10, nefa tsy hadino fa mifototra amin'ny tsaho izany rehetra izany ary, noho izany, dia mbola tsy fampahalalana ofisialy.
1 Famaritana teknika lehibe an'ny Huawei Mate 10
1.4 Fahaleovantena sy fanampiny
2 Ny famolavolana ny Huawei Mate 10
Famaritana teknika lehibe an'ny Huawei Mate 10
Toy ireo teo alohany, ny Huawei Mate 10 ho smartphone finday avo lenta io. Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Bloomberg, Richard Yu, CEO an'ny Huawei's Consumer Business Group, dia nanamarika fa Ny Mate 10 dia ho matanjaka kokoa noho ny sainan'i Apple manaraka, miaraka amin'ny bateria lehibe kokoa, "écran feno", hafainganam-pandeha bebe kokoa, fanatsarana fakan-tsary ary maro hafa.
Ny tsaho milaza fa hanana efijery izy io LCD 6-inch «Mihetsika feno» saika tsy misy frame (ampitahaina amin'ny 5,9 ″ sy ny vahaolana Full HD an'ny Mate 9), miaraka amin'ny vahaolana 2.160 x 1.080 teboka ary ny tahan'ny lafiny 2: 1, ka ho finday avo kokoa sy tery kokoa izy io. Ary i Japan Display no hamokatra.
Ary koa misy tsaho milaza fa ho hitantsika dikan-teny roa: Huawei Mate 10 sy Mate 10 Pro. Ity farany no ho iray tsy misy frame raha ilay teo aloha kosa dia hanana efijery fisaka sy ny refy 16: 9. Ho an'ny ambiny, izy ireo dia ho maodely mitovy amin'ny miavaka.
Ao anatiny no hipetrahan'ny Huawei Kirin 970 processeur izay no hanomboka amin'ity modely ity. Ary na dia tsy mahalala na inona na inona momba ny habetsaky ny RAM ao anatiny aza isika, dia mety hahita isika 4GB na RAM 6GB, toy ny sasany amin'ireo mpifaninana aminy lehibe.
Famaritana ny fakan-tsary roa lehibe, izay vao nohamafisin'ny Huawei Australia tamin'ny alàlan'ny sioka iray.
Toy ny fanao amin'ny fitaovana avo lenta an'ny Huawei, afaka manantena hahita isika isika a Leica sonia RGB sy fananganana fakantsary monochrome izay hanana sensor 12 sy 20 MP, toa ny Mate 9 ihany.
Misy ny tsaho milaza fa io fitaovana io mety misy fakantsary roa anoloana koa io, toy ny Oppo F3, izay mety hampalaza azy indrindra amin'ireo mpankafy selfie.
Fahaleovantena sy fanampiny
Etsy ankilany, voalaza fa hanana a Bateria 4.000 mAh toy ny teo alohany, miaraka amin'ny teknolojia Super fiampangana avy any Huawei, na dia matanjaka kokoa aza ny processeur dia tokony ho tsara kokoa ihany koa ny fampisehoana an'ity bateria ity.
Ny tsaho hafa koa dia manondro fiasan'ny fankasitrahana amin'ny tarehy, mandra-pahatongan'ny Fitahirizana 128 GB, ary slot amin'ny karatra microSD.
Afaka tonga ny Huawei Mate 10 Android 8.0 Oreo eo ambanin'ny interface mpampiasa nohavaozina EMUI 6. Momba ny Oreo efa fantatsika tsara, tsy toy ny an'ny EMUI 6
Ny famolavolana ny Huawei Mate 10
Mampalahelo fa mbola tsy afaka nahita sary ofisialy izahay ny Huawei Mate 10 mbola misy, fa noho ny tsaho momba ny endriny dia afaka nahita ny sasany izay manampy anay haka sary an-tsaina hoe hanao ahoana ny smartphone.
Na dia ho avy aza ny Mate 10 miaraka a efijery somary lehibe kokoa noho ny teo alohany, ny haben'ny terminal dia ho kely kokoa. Hanasongadina ny smartphone vaovao frame tena manifyBe loatra ka ny tahan'ny efijery amin'ny vatana dia mety ho avo kokoa noho ny an'ny Galaxy S8, izany hoe, mihoatra ny 83,6 isan-jato. Mazava ho azy fa mahita ny làlana nalehan'ireo mpifaninana lehibe aminy, Huawei dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mampihena ny zana-kazo sy mamorona telefaona mifintina kokoa hitoerana hatrany amin'ny fifaninanana.
Toy ny tamin'ny taon-dasa, ny mpamaky ny rantsan-tànana angamba ho hita ao aorinar an'ny fitaovana, eo ambanin'ny fakantsary roa. Raha naheno tsaho isika fa mety misafidy scanner ao anaty fampisehoana i Huawei, tsy hitranga izany satria ny teknolojia hanaovana izany dia voalaza fa mbola tsy vonona.
Ary toy ny maodely tamin'ny taon-dasa, ny Huawei Mate 10 dia hanasongadina a vatana metaly miolakolaka izay no mahatonga azy hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny tanana.
Ary hatreto izay rehetra fantatsika hatreto nefa tsy fantatsika momba ny Huawei Mate 10 ary izany dia, mandra-pahatongan'ny orinasa manome fampahalalana ofisialy, tsy misy azo antoka. Saingy amin'ny Androidsis dia hitandrina hatrany izahay ary hampahafantatra anao hatrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ity no fantatsika momba ny Huawei Mate 10 ho avy
Ny fitsapana dia manondro fa ny Galaxy Note 8 dia manana ny efijery tsara indrindra manerantany